NgoJuni 25, 2021, Inkampani ye-SIBO yaqhuba uqeqesho lwezakhono zokuhlangula kwi-Intanethi kubo bonke abasebenzi. Kolu qeqesho, abasebenzi be-SIBO bafunde izakhono ezisisiseko zokuhlangula ngokukhawuleza kwithiyori ngokubukela iividiyo ngokudibeneyo. Kwelinye icala, kuyathenjwa ukuba umqeshwa ...
Umthamo wamanzi wamadoda aqhelekileyo umalunga ne-60%, umxholo wamanzi amabhinqa yi-50%, kwaye umxholo wamanzi eembaleki ezikumgangatho ophakamileyo usondele kwi-70% (kuba umxholo wamanzi esihlunu uphezulu njenge-75% kunye nomxholo wamanzi Amanqatha ayi-10% kuphela). Amanzi lelona candelo libalulekileyo legazi. Inga...
Iingozi ezintlanu zemidlalo yangaphandle
Kwiintaba nakwezinye iindawo zendalo, kukho izinto ezinobungozi ezahlukeneyo, ezinokubangela izoyikiso kunye nokwenzakala kwabagibeli nangaliphi na ixesha, okukhokelela kwiintlekele ezahlukeneyo zeentaba. Masithathe amanyathelo othintelo kunye! Uninzi lwabathandi bezemidlalo bangaphandle abanamava kunye nokungabikho kweefores ...
Guqula ngokuhamba kwexesha kunye nokuhamba kwexesha
I-2021 yeNtwasahlobo / ihlobo le-Noodle Accessories Exhibition evulwe kakuhle kwiNgqungquthela yeSizwe yase-Shanghai kunye neZiko leMiboniso. Njengomboniso kulo mboniso, i-SBS ifuna uphuhliso oluqhelekileyo kunye noogxa kumzi mveliso. Ngeli xesha, isitayile somboniso we-SBS silula kwaye si-Nordic. Isakhelo siphela sisebenzisa ...
Ubhubhane weSikhokelo seMidlalo yangaphandle
Ukuzilolonga ngokufanelekileyo ngaphandle kunokuyiphucula impilo kwaye kuphucule umgangatho wobomi. Nangona kunjalo, isithsaba sangoku sesifo somoya somoya esitsha asidlulanga ngokupheleleyo. Nokuba awunakukwazi ukuyamkela indalo, kuya kufuneka uphume ngononophelo kwaye uthathe amanyathelo okukhusela. Makhe ndibelane nawe ngamanyathelo okhuseleko ...
Abantu abaninzi baya kubuza, ndinokuba nguthixo wangaphandle njani? Ewe, kufuneka kuthathe ixesha ukuqokelela amava kancinci. Nangona uthixo ongaphandle engakhawulezi, kodwa ungafunda ulwazi lwangaphandle olubandayo olwaziwa kuphela nguthixo ongaphandle, masijonge, uyazi ukuba zeziphi! 1. Musa c ...
INkomfa yoQeqesho ye-Etiquette yoShishino lwaBasebenzi
Emva kwemini kaJuni 9, 2021, bonke abasebenzi beSebe lezentengiso le-SIBO babambe intlanganiso yoqeqesho yesimilo kwishishini kwiholo yenkomfa kumgangatho wesine. AbakwaSIBO bameme umhlohli odumileyo uLiu Yuhua ukuba azokucacisela abasebenzi. Kolu qeqesho, uNkosikazi Liu ubeke f ...
Isiqulatho seContainer siphinde sahlawulwa kwaye Umndilili weXabiso lokuThumela kwelinye ilizwe unyuswe ngokuBonakalayo
Ngokwedatha evela kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezothutho, imfuno yentengiso yokuthunyelwa kweekhonteyina kumazwe angaphandle yaqhubeka iphezulu ngo-2021. Kwangelo xesha, ukunqongophala kwendawo kunye nokunqongophala kwezikhongozeli ezingenanto kukhokelele ekusekweni kwemakethi yomthengisi. Ukubhukisha amaxabiso emithwalo kuninzi r ...
Imidlalo esebenzayo yangaphandle, indlela yokuphila esebenzayo nenempilo, ibonakalisa isimo sengqondo sethemba ebomini, kwaye iyimbonakaliso yokhetho lwabantu lokomoya. Ayikhulisi kuphela uluvo, yonyusa ulwazi, yandisa ingqondo, yenza umthambo, iphinde ibuyise umzimba nengqondo, ikwa ...
Intlanganiso yokuncoma uMqeshwa eSibo
Ngomhla we-4 kaMeyi, sihlanganisene ndawonye kwaye sabamba intlanganiso yokuncoma umqeshwa obalaseleyo kwiNkampani yaseSibo. KwiNkampani yaseSibo, kwavela inani labasebenzi ababalaseleyo. Basebenzise umsebenzi wabo onzima nokubila ukuvuna iziqhamo zomsebenzi nozuko. Kwangelo xesha, bayazingca ngokuba yiSibo nganye ...